မှေးကငျးစကလေးတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး မိဘတှေ သတိမထားမိတဲ့ အမှား (၇) ခကျြ
HomeKnowledgeမှေးကငျးစကလေးတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး မိဘတှေ သတိမထားမိတဲ့ အမှား (၇) ခကျြ
H June 23, 2021
ကလေးတှကေို အကောငျးဆုံး ပွုစု စောငျ့ရှောကျနိုငျမယျ့ နညျးလမျးတှကေို blog တှေ၊ သူနာပွုတှေ၊ ဖိုရမျတှေ၊ အဘှားတှေ ဆီကနေ လလေ့ာလို့ ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တဈခါတလမှော မိခငျအခြို့က ကလေးစောငျ့ရှောကျနညျးနဲ့ ပတျသကျပွီး ငွငျးခုံနကွေတုနျးပါပဲ။ ငယျရှယျသေးတဲ့ မိဘတှေ ပွုလုပျတတျတဲ့ အမှားလေးတှကေ ကလေးတှအေတှကျ အသကျအန်တရာယျ နိုငျပါတယျ။
1. ကလေးကို နို့မှုနျ့မတိုကျခွငျး
အမရေဲ့နို့က ကလေးတှအေတှကျ အကောငျးဆုံးပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ တဈခါတလမှော အမရေဲ့နို့ကို မရနိုငျတဲ့အခါလညျး ရှိနိုငျပါတယျ။ အဲဒီအခါ သူနာပွုတှကေ နို့မှုနျ့ကိုဖြျောပွီး ကလေးကို တိုကျပါတယျ။ တခြို့မိခငျတှကေ ကလေးကို နို့မှုနျ့တိုကျတာ မကွိုကျပါဘူး။ ကလေးတှေ ဗိုကျဆာခွငျးက အလှနျအန်တရာယျမြားပါတယျ။ ဗိုကျဆာရငျ ရဓောတျခနျးလာပွီး အသကျ ဆုံးရှုံးနိုငျလို့ပါ။
2. ကလေး ဗိုကျအပွညျ့ လှနျခွငျး
ကလေးငိုတာက အမွဲတမျး ဗိုကျဆာနလေို့ မဟုတျပါဘူး။ တဈနရောက နာကငျြလို့ ဒါမှမဟုတျ အမကေို တှခေ့ငျြလို့လညျး ကလေးငိုပါတယျ။ တဈခါတလမှော ကလေးငိုရငျ ဗိုကျဆာတယျ ထငျပွီး မုနျ့တှကြှေေးခွငျးက ကလေးကို ဗိုကျအပွညျ့ လှနျစပေါတယျ။ ကလေးရဲ့ ဗိုကျထဲမှာ သကျတောငျ့သကျသာ မဖွဈတော့ပါဘူး။ အဲဒါကွောငျ့ ကလေးငိုတိုငျး ဗိုကျဆာလို့ ငိုတာ မဟုတျပါဘူး။
3. နို့ကို ဘူးထဲထညျ့ထားခွငျး
တဈခါတလေ ကရြငျ ကလေးတှကေ နို့ကို ကောငျးကောငျး မစို့ကွပါဘူး။ အဲဒီအခါ အမတှေကေ နို့ကိုညှဈပွီး ဘူးထဲ ထညျ့ထားကွပါတယျ။ ယဘေုယြ အားဖွငျ့တော့ ဒါဟာ အန်တရာယျ မရှိပါဘူး။ နို့ဘူးကနေ နို့စို့ရတာက ကလေးတှအေတှကျ ပိုလှယျကူပါတယျ။ အဲဒီအခါ ကလေးက ဗိုကျပွညျ့နပေမေယျ့လညျး နို့ဘူးကို ဆကျသောကျနေ မှာပါ။ ကလေးတှကေ နို့ကို လိုတာထကျ ပိုပွီး သောကျရငျ စကားပွောတတျတဲ့ အရှယျမှာ ပွဿနာ ရှိလာနိုငျပါတယျ။
4. ကလေးကို အလှနျ ထုပျထားခွငျး
ကလေးကို နှေးနအေောငျ ဆိုပွီး စောငျတှနေဲ့ ထုပျထားတတျ ကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကလေးတှမှော အပူလှနျကဲရငျ သနေိုငျတဲ့အထိ အန်တရာယျ ရှိပါတယျ။ အပူခြိနျ 64`ဖာရငျဟိုကျနဲ့ 68`ဖာရငျဟိုကျကွားက ကလေးတှအေတှကျ သငျ့တျောတဲ့ အပူခြိနျပါပဲ။ ကလေးတှကေို စောငျအထူကွီးတှနေဲ့၊ စောငျ အထပျလိုကျကွီးတှနေဲ့ မထားသငျ့သလို အပူပေးစကျ ဘေးမှာလညျး မထားသငျ့ပါဘူး။ ပါးလေးတှနေီနရေငျ၊ ခြှေးတှေ အလှနျအမငျး ထှကျနရေငျ ကလေးက အပူလှနျကဲနတောပါ။
5. ကလေးရဲ့ ပတျဝနျးကငျြကို ပိုးသတျခွငျး
အရငျတုနျးက လူကွီးတှကေ ကလေးကို ရနှေေးနဲ့ ရခြေိုးပေးရမယျ၊ အနှီးတှကေို မီးပူတိုကျရမယျ၊ ကလေးရဲ့အခနျးကို ခဏခဏ သနျ့ရှငျးရေး လုပျရမယျလို့ ယူဆကွပါတယျ။ ငယျရှယျသေးတဲ့ မိဘတှကေတြော့ ကလေးရဲ့ ကနျြးမာရေးကို စိုးရိမျပွီး ကလေးရဲ့ဘေးမှာ အိမျမှေး တိရစ်ဆာနျလေးတှေ မထားပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ကလေးရဲ့ ပတျဝနျးကငျြမှာ အရမျး သနျ့ရှငျးနရေငျ ကလေးမှာ ကိုယျခံအားမကောငျးတတျပါဘူး။ ဖြားလှယျနာလှယျ ဖွဈတတျပါတယျ။
6. ကလေးတှနျးလှညျးကို မှနျကနျစှာ အသုံးမပွုခွငျး
တခြို့ဓာတျလှကေားတှကေ မွနျမွနျ ပိတျသှားတတျတာကွောငျ့ ဓာတျလှကေားစီးရငျ ကလေးကို တှနျးလှညျးထဲကနေ ထုတျပွီး လကျမှာ ခြီထားသငျ့ပါတယျ။
မိဘတှကေ ပုခကျကို ညငျညငျသာသာ မလှဲရငျ ကလေးတှေ ငိုတတျပါတယျ။ ကလေးတှရေဲ့လညျပငျးက အားနညျးပွီး ဦးနှောကျကလညျး နုပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ ပုခကျကို အားနဲ့လှဲရငျ အခနျ့မသငျ့ရငျ ကလေးက မသနျမစှမျးအထိ ဖွဈသှားနိုငျပါတယျ။
မွေးကင်းစကလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မိဘတွေ သတိမထားမိတဲ့ အမှား (၇) ချက်
ကလေးတွေကို အကောင်းဆုံး ပြုစု စောင့်ရှောက်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို blog တွေ၊ သူနာပြုတွေ၊ ဖိုရမ်တွေ၊ အဘွားတွေ ဆီကနေ လေ့လာလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတလေမှာ မိခင်အချို့က ကလေးစောင့်ရှောက်နည်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ငြင်းခုံနေကြတုန်း ပါပဲ။ ငယ်ရွယ်သေးတဲ့ မိဘတွေ ပြုလုပ်တတ်တဲ့ အမှားလေးတွေက ကလေးတွေအတွက် အသက်အန္တရာယ် နိုင်ပါတယ်။
1. ကလေးကို နို့မှုန့်မတိုက်ခြင်း
အမေရဲ့နို့က ကလေးတွေအတွက် အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတလေမှာ အမေရဲ့နို့ကို မရနိုင်တဲ့အခါလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ သူနာပြုတွေက နို့မှုန့်ကိုဖျော်ပြီး ကလေးကို တိုက်ပါတယ်။ တချို့မိခင်တွေက ကလေးကို နို့မှုန့်တိုက်တာ မကြိုက်ပါဘူး။ ကလေးတွေ ဗိုက်ဆာခြင်းက အလွန်အန္တရာယ်များပါတယ်။ ဗိုက်ဆာရင် ရေဓာတ်ခန်းလာပြီး အသက် ဆုံးရှုံးနိုင်လို့ပါ။
2. ကလေး ဗိုက်အပြည့် လွန်ခြင်း
ကလေးငိုတာက အမြဲတမ်း ဗိုက်ဆာနေလို့ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်နေရာက နာကျင်လို့ ဒါမှမဟုတ် အမေကို တွေ့ချင်လို့လည်း ကလေးငိုပါတယ်။ တစ်ခါတလေမှာ ကလေးငိုရင် ဗိုက်ဆာတယ် ထင်ပြီး မုန့်တွေကျွေးခြင်းက ကလေးကို ဗိုက်အပြည့် လွန်စေပါတယ်။ ကလေးရဲ့ ဗိုက်ထဲမှာ သက်တောင့်သက်သာ မဖြစ်တော့ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ကလေးငိုတိုင်း ဗိုက်ဆာလို့ ငိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။
3. နို့ကို ဘူးထဲထည့်ထားခြင်း
တစ်ခါတလေ ကျရင် ကလေးတွေက နို့ကို ကောင်းကောင်း မစို့ကြပါဘူး။ အဲဒီအခါ အမေတွေက နို့ကိုညှစ်ပြီး ဘူးထဲ ထည့်ထားကြပါတယ်။ ယေဘုယျ အားဖြင့်တော့ ဒါဟာ အန္တရာယ် မရှိပါဘူး။ နို့ဘူးကနေ နို့စို့ရတာက ကလေးတွေအတွက် ပိုလွယ်ကူပါတယ်။ အဲဒီအခါ ကလေးက ဗိုက်ပြည့်နေပေမယ့်လည်း နို့ဘူးကို ဆက်သောက်နေ မှာပါ။ ကလေးတွေက နို့ကို လိုတာထက် ပိုပြီး သောက်ရင် စကားပြောတတ်တဲ့ အရွယ်မှာ ပြဿနာ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
4. ကလေးကို အလွန် ထုပ်ထားခြင်း
ကလေးကို နွေးနေအောင် ဆိုပြီး စောင်တွေနဲ့ ထုပ်ထားတတ် ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးတွေမှာ အပူလွန်ကဲရင် သေနိုင်တဲ့အထိ အန္တရာယ် ရှိပါတယ်။ အပူချိန် 64`ဖာရင်ဟိုက်နဲ့ 68`ဖာရင်ဟိုက်ကြားက ကလေးတွေအတွက် သင့်တော်တဲ့ အပူချိန်ပါပဲ။ ကလေးတွေကို စောင်အထူကြီးတွေနဲ့၊ စောင် အထပ်လိုက်ကြီးတွေနဲ့ မထားသင့်သလို အပူပေးစက် ဘေးမှာလည်း မထားသင့်ပါဘူး။ ပါးလေးတွေနီနေရင်၊ ချွေးတွေ အလွန်အမင်း ထွက်နေရင် ကလေးက အပူလွန်ကဲနေတာပါ။
5. ကလေးရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပိုးသတ်ခြင်း
အရင်တုန်းက လူကြီးတွေက ကလေးကို ရေနွေးနဲ့ ရေချိုးပေးရမယ်၊ အနှီးတွေကို မီးပူတိုက်ရမယ်၊ ကလေးရဲ့အခန်းကို ခဏခဏ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ရမယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။ ငယ်ရွယ်သေးတဲ့ မိဘတွေကျတော့ ကလေးရဲ့ ကျန်းမာရေးကို စိုးရိမ်ပြီး ကလေးရဲ့ဘေးမှာ အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်လေးတွေ မထားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကလေးရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အရမ်း သန့်ရှင်းနေရင် ကလေးမှာ ကိုယ်ခံအားမကောင်းတတ်ပါဘူး။ ဖျားလွယ်နာလွယ် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
6. ကလေးတွန်းလှည်းကို မှန်ကန်စွာ အသုံးမပြုခြင်း
တချို့ဓာတ်လှေကားတွေက မြန်မြန် ပိတ်သွားတတ်တာကြောင့် ဓာတ်လှေကားစီးရင် ကလေးကို တွန်းလှည်းထဲကနေ ထုတ်ပြီး လက်မှာ ချီထားသင့်ပါတယ်။
မိဘတွေက ပုခက်ကို ညင်ညင်သာသာ မလွှဲရင် ကလေးတွေ ငိုတတ်ပါတယ်။ ကလေးတွေရဲ့လည်ပင်းက အားနည်းပြီး ဦးနှောက်ကလည်း နုပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ပုခက်ကို အားနဲ့လွှဲရင် အခန့်မသင့်ရင် ကလေးက မသန်မစွမ်းအထိ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။